Ekliziastis 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lingala Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Otetela Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
5 Chee ụkwụ+ gị nche mgbe ọ bụla ị gara n’ụlọ ezi Chineke; garuo nso ka i gee ntị,+ kama ịchụ àjà dị ka ndị nzuzu,+ n’ihi na ha adịghị ama na ha na-eme ihe ọjọọ.+ 2 Adịla ngwa ikwu okwu; ekwekwala ka obi gị+ dị ngwa ikwu okwu n’ihu ezi Chineke.+ N’ihi na ezi Chineke nọ n’eluigwe+ ma gị onwe gị nọ n’ụwa. Ọ bụ ya mere okwu gị kwesịrị iji dị ole na ole.+ 3 N’ihi na ọ bụ uche ịdị n’ọtụtụ ihe na-akpata ịrọ nrọ,+ ọ bụkwa ọtụtụ okwu+ na-eme ka a nụ olu onye nzuzu. 4 Mgbe ọ bụla i kwere Chineke nkwa, egbula oge imezu ya,+ n’ihi na ihe ndị nzuzu+ adịghị atọ ya ụtọ. Ihe i kwere ná nkwa, mezuo ya.+ 5 Ọ dị mma na i kweghị nkwa+ karịa na i kwere nkwa ma ghara imezu ya.+ 6 Ekwela ka ọnụ gị mee ka anụ ahụ́ gị mehie,+ ekwukwala n’ihu mmụọ ozi+ na i mere ya n’amaghị ama.+ Gịnị mere okwu ọnụ gị ga-eji kpasuo ezi Chineke iwe, o wee laa ihe aka gị rụrụ n’iyi?+ 7 N’ihi na ọ bụ uche ịdị n’ọtụtụ ihe na-akpata ịrọ nrọ,+ na-akpatakwa ọtụtụ ihe efu na ọtụtụ okwu. Ma, tụọ egwu ezi Chineke.+ 8 Ọ bụrụ na ị hụ ebe a na-emegbu onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya, na ebe e ji aka ike na-ewepụ ikpe ziri ezi+ na ezi omume n’ógbè a na-achị achị, ya ejula gị anya,+ n’ihi na onye dị elu karịa onye ahụ dị elu+ na-ahụ ihe na-emenụ,+ e nwekwara ndị dị elu karịa ndị ahụ dị elu. 9 Ihe ala na-emepụtakwa bụ nke mmadụ niile a;+ a na-ejekwara eze ozi site n’ịkọ ugbo.+ 10 Ọlaọcha agaghị eju onye hụrụ ọlaọcha n’anya afọ, ego agaghịkwa eju onye ọ bụla nke hụrụ akụ̀ n’anya afọ.+ Nke a kwa bụ ihe efu.+ 11 Mgbe ihe ọma dị ọtụtụ, ndị na-eri ya na-adịkwa ọtụtụ.+ Olee uru ọ baara onye nwe ya, ma ọ́ bụghị naanị ịnọ na-ele ya anya?+ 12 Ụra+ onye na-eje ozi na-atọ ya ụtọ, n’agbanyeghị ma ọ̀ bụ ihe nta ma ọ bụ ihe ukwu ka o riri; ma ọtụtụ ihe onye ọgaranya nwere adịghị ekwe ya ka ọ rahụ ụra. 13 E nwere oké ọdachi m hụworo n’okpuru anyanwụ: akụ̀ onye nwere akụ̀ na-akpakọba na-ewetara ya ọdachi.+ 14 Akụ̀ ahụ alawokwa n’iyi+ n’ihi ọrụ ahụhụ, ọ mụwokwa nwa, mgbe ọ na-enweghị ihe dị ya n’aka ma ọlị.+ 15 Dị nnọọ ka mmadụ gba ọtọ si n’afọ nne ya pụta, ọtọ ka ọ ga-agbakwa laa,+ dị nnọọ ka ọ gba pụta; ọ dịghịkwa ihe ọ bụla mmadụ pụrụ iwere laa,+ ọ dịghị ihe ọ pụrụ iji laa n’ihi ịrụsi ọrụ ike ya. 16 Nke a kwa bụ oké ọdachi: kpọmkwem otú mmadụ dị pụta, otú ahụ ka ọ ga-adị laa; oleekwa uru ọ baara onye nọ na-arụsi ọrụ ike n’ịchụso ifufe?+ 17 Ọ nọkwa n’ọchịchịrị na-eri ihe n’ụbọchị ya niile n’oké mwute,+ na-arịa ọrịa, nọrọkwa n’oké iwe. 18 Lee! Ihe kasị mma mụ onwe m hụworo, nke bụ́ ihe mara mma, bụ ka mmadụ rie ihe, ṅụọ ihe ọṅụṅụ ma hụ ihe ọma n’ihi ọrụ niile ọ gbalịsiri ike+ na-arụ n’okpuru anyanwụ n’ụbọchị niile nke ndụ ya nke ezi Chineke nyere ya, n’ihi na nke ahụ bụ òkè ya. 19 Onye ọ bụla ezi Chineke nyewokwara akụ̀ na ihe onwunwe,+ o mewokwa ka o nwee ike iri ya+ na iwere ihe bụ́ òkè ya, na ịṅụrị ọṅụ n’ịrụsi ọrụ ike ya.+ Nke a bụ onyinye Chineke.+ 20 N’ihi na ọ gaghị echeta ụbọchị ndụ ya mgbe niile, n’ihi na ezi Chineke na-eme ka obi ya jupụta n’aṅụrị.+